धेरै क्याफिन उपभोग गर्नुहोस् - साधारण समस्याहरू जसको बारेमा तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ | बेजिया
धेरै क्याफिन खपतको साथ धेरै सामान्य समस्याहरू
सुसाना Godoy | | स्वास्थ्य सल्लाहहरू
Sabemos que धेरै क्याफिन खपत यो हाम्रो शरीर वा स्वास्थ्य को लागी राम्रो कुरा होइन। तर यो सत्य हो कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन एक दिनको धेरै कफहरू बिना बाँच्न सक्दैनन्। सबै चीज जस्तै, हामी सधैं हामी के पिउँछौं भनेर ट्र्याक राख्नुपर्दछ र त्यसैले क्याफिन पछाडि छैन।
हामी यसको साथ रमाईलो गर्दछौं बिहान कफी, यसले हामीलाई पूर्ण रूपमा जगाउँदछ। मध्यरातमा खाजा वा मध्य-बिहानको पछि हामी उसलाई माफ गर्न चाहँदैनौं। निस्सन्देह, यदि यो दिउँसोको बीचमा हुन्छ, हामी अर्कोमा इत्यादि लगाउँछौं। तर के तपाइँ साँच्चिकै शरीरको लागि यति धेरै क्याफिनको सबैभन्दा धेरै खतराहरू जान्नुहुन्छ?
1 क्याफिन भनेको के हो?
2 मुटुको दर बढाउनुहोस्
4 माइग्रेनको उपस्थिति बढावा दिन्छ
6 बेचैन खुट्टा सिन्ड्रोम
7 मूत्रवर्धक प्रभाव
क्याफिन भनेको के हो?
तपाईंले एक भन्दा बढी अवसरमा सुन्नुभएको होला, क्याफिन एक पदार्थ हो जुन बोटहरूमा पाउन सकिन्छ। त्यसैले योaको रूपमा बोल्दछ उत्तेजक। यो सत्य हो कि यसको उपभोगलाई सँधै नियन्त्रण गर्नाले हामीलाई ठूलो फाइदा पनि हुन्छ, जुन सबै खराब हुँदैन। ती मध्ये ती, यो धीरज सुधार र थकान बिदा भन्छ कि मान्यता छ। भनिन्छ कि यो फोक्सोको कार्यको लागि राम्रो हो, तर सँधै कम डोजमा।
मुटुको दर बढाउनुहोस्
जब तपाईं एक उत्तेजकको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, र कफिको बारेमा मात्र नभई त्यसमा भएका पेयहरूको बारेमा पनि, यसले मुटुको दर र यसको साथ बदल्छ, हृदय स्वास्थ्य। यस प्रणालीको आवेगहरू तीव्र हुन गइरहेका छन् जब तिनीहरूले आजका स्टार घटक प्राप्त गर्छन्। कफी पाएको एक घण्टाको एक चौथाई मात्र, शरीर पहिले नै प्रतिक्रिया दिन थाल्छ। दुबै रक्तचाप र नाडी १०% भन्दा बढि परिवर्तन गर्न थाल्छ। त्यसकारण हामी धेरै होशियार हुनुपर्छ।
यो अपरिहार्य छ, हामीले पहिले उल्लेख गरेको भन्दा, मुटुको दर। यी सबै एक महान लूप हो जसले सम्पूर्ण शरीरलाई असर गर्न थाल्छ। तसर्थ, नसहरूले पनि यसलाई याद गर्छन्, र धेरै। हामी थोरै महसुस गर्न लागेका छौं नर्भस र चंचल क्याफिन को एक उच्च मात्रा ingested पछि। थप रूपमा, हामी बढी चिन्तित महसुस गर्न सक्दछौं र केहि थरथर काँपेको भए पनि, केहि बढी गम्भीर मामिलाहरूमा।
माइग्रेनको उपस्थिति बढावा दिन्छ
यो सत्य हो टाउको दुखाई तिनीहरू विभिन्न कारणका लागि देखा पर्न सक्छन्। यस अवस्थामा, माइग्रेनहरू पछाडि छैनन्। तर क्याफिनको कारणले यसले के हुन सक्दछ कि ती दुखाइहरू दीर्घकालिक हुन्छन् र लक्षणहरू बोधो हुन्छन्। त्यसकारण धेरै चोटि कफी वा क्याफिन पिउनु हुँदैन जब हामी टाउको दुखाइबाट पीडित हुन्छौं।
निस्सन्देह, यो क्याफिनको एक धेरै उपभोग गर्न को लागी आउँछ जब यो एक सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरु हो। निद्रा अवरोध छ शरीरमा हामीलाई छोड्ने चिन्ताको अवस्थाको लागि। त्यसैले रमाईलो सपनाको शान्त रात हुनु धेरै गाह्रो हुन गइरहेको छ। यद्यपि यो सत्य हो कि त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले अरूलाई त्यति प्रभाव पार्दैन। जे भए पनि, बेलुका दिउँसो वा साँझ क्याफिनबाट बच्नुहोस्।
बेचैन खुट्टा सिन्ड्रोम
स्नायु प्रणालीमा सम्बन्धित, अर्को क्याफिलन हो जुन हामीले धेरै क्याफिन उपभोग गरेपछि महसुस गर्न सक्दछौं। यो एक प्रकारको ऐंठन हो जसले तपाईंलाई नियमित रूपमा तपाईंको खुट्टा सार्न बाध्य पार्छ, तपाईं उभिएर वा बसेर पनि। तर यो मात्र होईन, तर यसले दुखाइ र चिसो र तातोको पनि एक संवेदना प्रदान गर्दछ। त्यसैले यो रोगबाट पीडित हुँदा उत्तेजकहरू नियन्त्रण गर्न सधैं उत्तम हुन्छ।
एकातिर, यो सत्य हो कि यो राम्रो हुन सक्छ। किनकि कफिले हामीलाई बाथरूममा जानको लागि बारम्बार जान्छ, यसको ड्यूरिटिक प्रभावको कारण। तर अर्कोतर्फ यो त्यस्तो छैन। किनकि हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ कि हामी डिहाइड्रेटेड हुन सक्छौं। किनकि हामी पानीको एक राम्रो भाग तर सोडियमलाई हटाउँदैछौं। त्यसोभए, धेरै पानी पिउन सम्झनुहोस् र संतुलित आहार.
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » धेरै क्याफिन खपतको साथ धेरै सामान्य समस्याहरू
घरपालुवा जनावरले तपाईंलाई खुशी किन दिन्छ
जैविक फोहोर जुन तपाईं आफ्नो बिरूवाहरू खुवाउन सक्नुहुनेछ